Inhloko isimo - is ultimate isikhulu negunya zomthetho ukuphatha nokwenza izinqumo ngaphakathi lweMtsetfosisekelo ezweni elithile, kanye umuntu obhekene isikhundla wezwe enkundleni yomhlaba. ERussia, le misebenzi yenziwa uMongameli. Ngakho, nezinqumo uMongameli yoba amadokhumenti omthetho eliphakeme.
Imisebenzi umholi wezwe iyiphi isimo - republic, amakhosi ohlanga, umfelandawonye - elethe ukuphathwa, izixazululo kwezomnotho kanye nezinye eklanyelwe ukuthuthukisa ukuthuthukiswa izici zezombangazwe, zenhlalo nezomnotho. Ngokusemthethweni isinqumo bodokotela esisayinwe inhloko yezwe, abizwa ngokuthi "izimiso kamongameli". Umthelela lezi ziqondiso zisebenze endaweni yonke isimo. Isimiso esiyinhloko le mibhalo ukungabi ukungqubuzana kuya emthethweni oyisisekelo yezwe - uMthethosisekelo. Ngakho, ngokombono zomthetho umbono kwemithetho omongameli kuhleleka ngekubaluleka ukulandela uMthethosisekelo kanye nemithetho kahulumeni.
Ikhishwe ngu umholi imibhalo isimo kukhona ezimbili zama - normative futhi okungezona normative. Amadokhumenti omthetho ku ubunjalo umphakathi, okungukuthi, leso senzo sabo raspronyaetsya ngoba nenombolo enganqunyelwe abantu, kufaka isicelo ohlalayo okuphindaphindiwe. Ukuze labo, ngokwesibonelo, osebenza umyalo wokuthi evunyiwe yokuma Russian isimo imihlobiso.
Ngaphezu kwalokho, kukhona izenzo ezingekho normative, okuyinto, uma sikubeka kalula, kuthiwa nature kwezomthetho umuntu, okusho ukuthi babe lapho uya khona ikheli. Ngokwesibonelo, imibhalo, axoshwe yehhovisi, noma Yokuqashwa kukhona nje enjalo. Lo muzwa esizalwa nawo nokuthi izimiso kamongameli ku yokuklomela imiklomelo, amaviyo ngamaviyo, kwaba ukukhoseliswa ezombusazwe noma ushwele.
Izinsuku engena amandla
Izimiso Wokulawula uMongameli we Russian Federation ukuthola amandla zomthetho izinsuku eziyisikhombisa ngemva ukushicilela kwayo imithombo ezisemthethweni, futhi kulo lonke izwe ngokuphelele futhi kanyekanye. Uma imibhalo aqukethe ulwazi lamadigri ekusithekeni obuhlukahlukene, noma kukhona izimfihlo isimo, lezi zenzo kamongameli avumelekile ngesikhathi nesignesha uMongameli ifihlekile.
Ngaphezu kwalokho, kukhona izinqumo, okuqukethwe okuhloswe ngalo ukuqeda izikhala zomthetho umthetho kahulumeni. Kulokhu, ukubulawa isikhathi sabo incike lapho okwakumelwe athuthukiswe kanye nalokho ezamukelwe ngu izikweletu olufanele. Kulokhu, ibhekisela ekuguquleni esinqumweni ku isinyathelo zomthetho ngesethulo eminye yawo Duma State.
ECrimea njengengxenye yeRussia. Ukubuya eCrimea eRussia
Lesikhumbuzo ukuze Yeltsin - indoda nenkathi
UMongameli Turkish Erdogan Recep Tayyip: Biography, nokuhileleka kwezombusazwe
Silulumagama Political e-Ukraine: bangobani maydanovtsy?
Umsuka kumiswa ukuphathwa isitayela uMargaret Thatcher
A uphawu ezinhle emhlabeni izikhali yomlando, okuyinto ushiye isibhamu Berdan
Yiziphi ibhodi iwakhelela umaka?
Lapho benza yesimanje football ihembe-izimpi?
Isuphamakethe "Magnet": lobuya abasebenzi kanye namakhasimende
Truck Imayini "Volvo-A35F»: incazelo kanye izici
Kusukela lokho kusiza Akriderm ukhilimu? Yokusetshenziswa
Sala kahle, whale! Ukulwisana Colorado amazambane bhungane amakhambi abantu
Iholide leholide "Iphupho" (U-Eagle) liyindawo enhle yeholide yamazwe
Uyazi lapho ukuhlanza ithanga esifundeni esise-Ural?